(Dhagayso) Khasaare ka dhashay Gaari lagu rasaaseeyay duleedka Caabudwaaq iyo Dagaal maleeshiyo Beeld dhexmaray. – Radio Daljir
Noofember 15, 2016 3:22 g 0
Caabuwaaq, Nov, 16, 2016 – Wararka ka Imaanaya Deegaanka Aricadays oo hoos Taga Degmada Caabudwaaq ee Gobolka Galgaduud ayaa waxau sheegayaan in saakay la Gubay Gaari ay la socdeen Dad ka Amba baxay Magaalada Caabudwaaq.
Weerarka lagu qaaday Gaariga oo Nuuciisu uu ahaa Xaajiyad ayaa la Tuhmayaa in ay Fuliyeen Maleeshiyaad kasoo jeeda Degmada Xeraale wallo ay iska Fogeeyeen.
Mid ka mid ah Ragga kusugan Jiida Hore ee Deegaanka Yoocade kana soo jeeda Degmada Xeraale ayaa Radio Daljir usheegay in gaariga aysan waxba kala socon isla markaana Beelaha Caabudwaaq ay iska Gubeen.
wariye Cumar laki man ayaa Taleefanka kula hadlay Mahad oo kamid ah Dadka Degmada Xeraale waxaana uu wax ka waydiiyay Dhacdadaasi iyo guud ahaan Xaaladda Deegaanka Aricadays.
Hoos ka dhagayso Codkii
Dhagayso Barnaamijka Caawa iyo Daljir Talaado 15 – Nov – 2016 Wariye Maxamuud Cabdi Ibraahim Studio Dalji Boossaaso